မိမိအသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် Nabilla ... ဒီဂရီသူ၏စာရင်းလုပ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "မိမိသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် Nabilla ဒီဂရီသူ၏စာရင်းလုပ် ...
မိမိအသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် Nabilla ဒီဂရီသူ၏စာရင်းလုပ် ...
Tele RELAY တစ်ခု6ဇူလိုင်လ 2019
နာမည်ကျော်နှမ်း baccalaureate, nabilla benattia မရှိခဲ့ဘူး။ အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သောကြာနေ့5ဇူလိုင်လ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်မိခင်ကသူ၏တွစ်တာအကောင့်ပေါ်မှာမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ တစ်ဦးဧည့်သည်စေရန်, သောမတ်စ် Vergara ၏ဇနီး သူသည်မိမိဒီဂရီလွဲချော်ခဲ့ said: "ကျွန်မရဲ့ဗန်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်နှင့်ကံမကောင်းငါဆိုးဆိုးရွားရွားနောင်တ။ ငါအလုပ်အပေါ်လေ့လာသင်ယူရန်ခဲ့ရပြီးသူကတောင်ပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါဖြစ်လာခဲ့သည်ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ".
ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအခြားဒီဂရီရွေ့လျားမတိုင်မီရှည်လျားမစောင့်ခဲ့ပါဘူး။ သူမကယခုနေထိုင်ရာလန်ဒန်, ခုနှစ်, သူမကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖို့ကြရပြီ။ "cons အားဖြင့်ငါကင်းဘရစ် CAE (အင်္ဂလိပ် C1 အဆင့်မြင့်အဆင့်) မှငါ့ဒီဂရီရှိသည်, ငါအခု CPE (ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအဆင့် C2) သွားတော်နှင့်ရိုးသားစွာသူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်" အသေးစိတျ Nabilla Twitter တွင်သူ၏နောက်လိုက် addressing မတိုင်မီ: "ပြီးနောက်ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဉာဏ်ရောထွေးမနေသင့်ပေမယ့်ဒီဂရီရှေ့ဆက်ဖို့နဲ့ဥာဏ်ရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ "
ငါသည်ငါ့ဗန်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်နှင့်ကံမကောင်းငါဆိုးဆိုးရွားရွားနောင်တ။ ငါအလုပ်အပေါ်လေ့လာသင်ယူရန်ခဲ့ရပြီးသူကတောင်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပေမယ်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါဖြစ်လာကြပါပြီ https://t.co/0e0faVmzEn
- Nabilla Vergara (@Nabilla) ဇူလိုင်လ 5, 2019
cons အားဖြင့်သာငါကင်းဘရစ် CAE (အင်္ဂလိပ် C1 အဆင့်မြင့်အဆင့်) မှငါ့ဒီဂရီရှိသည်, ငါအခု CPE (ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအဆင့် C2) သွားတော်နှင့်ရိုးသားစွာသူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်!
ခြောက်လကိုယ်ဝန်ဆောင်, nabilla benattia ထို့အပြင်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မိမိအပရိတ်သတ်တွေဆီကမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့အမှန်တကယ်အများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများများမှာရင်တောင်နှစ်ခုချစ်သူများအဘယ်အရာကိုမိမိတို့ကလေးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ် ဒါမှမဟုတ်မီးမောင်းထိုးအတွက်။ တွစ်တာတွင်သူမသည်ချက်ချင်းအနာစိမ်းသူမ၏ကလေးထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ "ကျနော်တို့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးမဟုတ်တဦးတည်းအရာသေချာဖြစ်ပါသည်, သေးမသိရပါဘူး, ကျနော်တို့အများဆုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်"ကောင်းကင်တမန်၏ယခင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
Nabilla benattia (ကိုယ်ဝန်ဆောင်) - ရုပ်ရှင်၏အနီရောင်ကော်ဇော "Roubaix တစ်ဦးအလင်း (! Oh ကရုဏာ)" စဉ်အတွင်း
တော်ဝင်ဗတ္တိဇံ: မင်းသားဟယ်ရီဟာထိတ်လန့်ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ကို & # 039 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်; ရေရှည် - & # 039; အသေးသုံးငွေ & # 039;
ကီဗင် Spacey တရားစွဲဆိုမိမိဘက်က၎င်း၏အရေးယူမှုမှထွက်သွား ...